XOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Xiaomi Open Source - အပိုင်း ၁ | Linux မှ
XOS-P1 ။ ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Xiaomi Open Source - အပိုင်း ၁
ဒီနှင့်အတူ အပိုင်း အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ « Xiaomi ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် " ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ၏ catalog ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းစတင်ပါလိမ့်မယ် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de "Xiaomi ကော်ပိုရေးရှင်း".
အဖြစ်လူသိများအုပ်စုများ၏ Technological Giants တစ် ဦး ချင်းစီကထုတ်ပြန်သောပွင့်လင်း applications များငါတို့၏အသိပညာကိုတိုးချဲ့ဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက် GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon နှင့် Microsoft) နှင့်ကဲ့သို့သောအခြားသူများ "Alibaba, Baidu, Huawei, Netflix, Samsung, Tencent, Xiaomi, Yahoo နှင့် Yandex".
1 XOS-P1: Xiaomi Open Source - အပိုင်း ၁
1.1 Xiaomi ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် application များ
1.1.2 ကြံ့ခိုင်သောဖြန့်ဝေထားသောနျူကလိယ (rDSN)
XOS-P1: Xiaomi Open Source - အပိုင်း ၁
applications များ Xiaomi ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်
စတင်ခြင်းမပြုမီတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် မှလွဲ၍ ၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် Xiaomi Open Source (XOS)သင်သည်ကုမ္ပဏီ၏အခြားပွင့်လင်းသောစီမံကိန်းများစွာကို၎င်း၏တရားဝင်ဆိုဒ် ၂ ခုတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည် GitHub (Xiaomi y မိုက်ခရို) နှင့်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Open Source, ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အစီအစဉ် y ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Libs.
XiaoMi ရဲ့နောက်ကွယ်ကပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ပရောဂျက်များ - ၄ င်းတို့သည်ကမ္ဘာ့ပညာရှင်များကိုချိတ်ဆက်ပြီးပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောနှင့်အောင်မြင်မှုရရှိစေရန်ဖန်တီးထားသောနည်းပညာများဖြစ်သည်။ Xiaomi ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်
တွင်ဖော်ပြထားသောစီမံကိန်းများ၏စာရင်းမှ "Xiaomi Open Source" ကျနော်တို့တှငျတှေ့ရှိသူများနှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ် « GitHub Xiaomi »အောက်ပါ Apps များမှစတင်:
အတိုချုပ် GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, အောက်ပါအကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည် -
XiaoMi ၏သဘာဝဘာသာစကားထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာကိရိယာ ၎င်းတွင် lexical, syntactic နှင့် semantic analysis ကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှု module များစွာရှိပြီးကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့အပြင်တရုတ် hyphenation tool ကို MiNLP-Tokenizer သည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုပြင်ခြင်းပြီးနောက် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလတွင်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ "
မှတ်ချက်ဖြေ - ဒီဖြည့်စွတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုဒီစပိန်လိုပိုဖြည့်စွတ်ပြီး၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတယ် link ကို.
RDSN သည်ခိုင်မာသည့်ဖြန့်ဝေထားသောစနစ်များကိုလျင်မြန်စွာတည်ဆောက်နိုင်ရန်အတွက်မူဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြန့်ကျက်ထားသည့်မူဘောင်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိရိယာများနှင့်ဒေသတွင်း runtime / အရင်းအမြစ်ပံ့ပိုးသူများအပါအ ၀ င် plug-in အစိတ်အပိုင်းများအတွက် microkernel ကိုရနိုင်သည်။ စီမံကိန်းကိုမူလကမိုက်ကရိုဆော့ဖ် Bing အတွက်တီထွင်ခဲ့ပြီးယခုအခါတွင်မူမိုက်ခရိုဆော့ဖ်၏အပြင်ဘက်တွင်ပါထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
မှတ်ချက်ဖြေ - ဒီဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပါတ်သက်ပြီးထပ်ဆင့်ဖြည့်စွတ်ပြီးဆက်စပ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုအောက်မှာဖော်ပြထားတယ် link ကို.
HIUI သည်အပြန်အလှန်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့်ရှေ့၊ အလယ်နှင့် backend များအတွက်စံ UI ဒီဇိုင်းအတွက်သင့်တော်သောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ "
မှတ်ချက်ဖြေ - နောက်ထပ်ဖြည့်စွတ်တဲ့အချက်အလက်နဲ့ဒီဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအောက်ပါမှာတိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်တယ် link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေရေးအကြောင်းကို «Xiaomi Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Xiaomi Corporation»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » XOS-P1 ။ ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Xiaomi Open Source - အပိုင်း ၁
PeerTube 3.2 တွင်ထူးခြားသောဒီဇိုင်း၊ တိုးမြှင့်မှုများနှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်
Biden သည် TikTok အားတားမြစ်ရန် Trump ၏အမိန့်ပေးမှုကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းခဲ့သည် - ၎င်းသည် Huawei အတွက်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်နိုင်သလော။